घरमै मल बनाएर छतमै फलाउन सकिन्छ तरकारी र फलफूल – WASHKhabar
घरमै मल बनाएर छतमै फलाउन सकिन्छ तरकारी र फलफूल
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०७:५९ 600 पटक हेरिएको
काठमाडौ : कोरोना कहरले यत्तिबेला सबैलाई घरभित्रै बस्न बाध्य बनाएको छ । धेरैले भन्ने गरेका छन् मोबाइल कति हेर्नु ? टेलिभिजन कति हेर्नु ? हुन पनि हो । सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनमा कोरोनाको भन्दा अरु समाचार खासै देख्न पाइँदैन । त्यस्ता समाचारले एक किसिमको मानसिक चिन्ता र त्रास बढाइरहेका हुन्छन् ।
बरु त्यो समयलाई कौसी खेतीमा लगाउन सके घरखर्च र समयको बचत हुन्छ । साथै आफ्नै घरमा बनाएको मलबाट खेती गर्न सकिने भएकाले अर्गानिक तरकारी उत्पादन हुन्छ, जसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ । अहिलेको समयमा बजार जानु स्वास्थ्यका हिसाबले धेरै जोखिमपूर्ण छ । अन्य कामधन्दा बन्द रहेकाले घरखर्च चलाउन समस्या भइरहेको यो समयमा तरकारी आफैंले उत्पादन गर्न सके धेरै राहत पुग्छ । अर्कोतर्फ शारीरिक व्यायाम पनि हुन्छ ।
कौसीमा तरकारी खेती कसरी गर्ने त ?
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर–७ की सावित्री तिमल्सिनाको घरमा खेर जाने चिज खासै हुँदैन । विगत ६ वर्षदेखि आफ्नै घरको छतमा तरकारी खेती गर्दै आएकी उनले छिमेकका १५/१६ घर–परिवारलाई तरकारी रोप्न सल्लाह पनि दिएकी छन् । आधिकारिक पेसा उनको छैन, गृहिणी महिला हुन् । यद्यपि महिला समूह र सामाजिक कार्यमा भने लागि रहन्छिन् ।
घरमै मल बनाउने तरिका
भाँडा राख्ने तरिका
बेर्ना उमार्नका लागि बीउ किनेर वा अघिल्लो साल घरमा उत्पादन भएका फलबाट उमार्न सकिन्छ । साथै नर्सरी तथा फार्मबाट ल्याएर पनि रोप्न सकिन्छ । तरकारीको गोडमेल कम्तीमा पनि साताको एकपटक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बाहेक आवश्यकताअनुसार गर्न सकिन्छ । गोडमेल गर्दा झार उखल्नेसँगै अनावश्यक रूपमा रहेको पात काट्ने पनि गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै दैनिक जसो पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ यद्यपि आकाशे पानी परिरहेको छ भने धाराको पानी लगाइरहनु पर्दैन । यसरी कौसी खेती गरेर समय, पैसाको बचत तथा स्वस्थ जीवनयापन गर्न सकिन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।